Vaovao - Ahoana ny fomba hanapaka sy hanamafisana ny fametahana composite
Raha ny sary etsy ambony aseho, mety ho toy izany ny faritra misy anao, tsy ara-dalàna izany ary irinao ny hamolavola azy amin'ny fomba miavaka. Saingy nilaza taminao foana ny ozinina WPC decking fa hamokatra vokatra iray na roa na habe ary halavany fotsiny izy ireo. Ireo dia mety hoheverinao fa tsy ho tanteraka ny famolavolana anao. Aza manahy fa ny fanapahana WPC mitambatra dia azo tapahina mba hifanaraka amin'ny kojakoja samihafa amin'ny famaritana, ny fitambarana koa dia azo aharatra, hombo, hoso-doko. Hamarino tsara ireo torohevitra etsy ambany, ho mora ianao ataovy irery.
Azonao atao ny manapaka tsipika miampita tsotra fametahana compositmitovy amin'ny fanapahanao kesika malefaka rehetra - miasa ny tsofa boribory mandeha tsara. Ny tsofa mitre herinaratra dia afaka manome fanapahana tena mahitsy sy mahitsy ary ny tsofa latabatra misy fanitarana fanohanana dia afaka manamora ny karazan-fanapahana rehetra. Soso-kevitra ny tendrony karbidaina - ny nify vitsy kokoa no tsara kokoa ho an'ny famotehana malama. Aza avela hangotraka be ny lelany rehefa manapaka satria mety hihoatra na hisavoana ny ratra.
Raha mametraka ny decking manodidina ny rafitra efa misy ianao dia azo ampiasaina ny router tsotra iray mba hanaovana fanapahana miolakolaka. Ny fanapahana madio dia tsy tokony hamela akora fako, fa raha mila manadio sisiny kosa ianao dia manorata hevitra fa tsy tokony hampiasa ilay sander. Sanders dia hanimba ny zava-bita ary amin'ny tranga maro dia hofoanana ny fiantohana anao. Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana.
Zava-dehibe koa ny elanelam-potoana fanampiny eo anelanelan'ny tendron'ny birao sy ny toerana ihaonan'ny tabilao amin'ny rindrina rehefa mihantona mifanitsy amin'ny rindrina ny fametahana. Eo anelanelan'ny tabilao farany sy farany dia avelao ny habaka 3/16-inch. Aiza ny fihaonan'ny birao mihaona amin'ny rindrina, avelao ny elanelana 1/2-inch salama mba hiantohana ny fivelarana sy ny fifanarahana raha tsy mifandray amin'ny rindrina. Izany dia hampitombo ny faharetan'ny tokotanin-tsambo ary koa hisorohana ny fandohalihana mandritra ny andro mafana indrindra amin'ny andro.
Ny takelaka fanaovana takelaka WPC dia azo fehezina mba hikambana amin'ny hazo voadidy amin'ny visy na amin'ny fehy miafina. Ny fampiasana visy biriky fitambarana dia manakiana satria natao manokana izy ireo mba hitazomana ny fitazonana.
Na dia miorina mafy kokoa noho ny kesika mahazatra aza ny birao fitambaran-trano mitambatra, dia mbola afaka tapaka ihany izany rehefa mitondra fiara mifatotra akaiky ny sisiny. Ny lavaka fanamoriana mialoha ny fandavahana dia afaka misoroka izany tsy hitranga ary hahatonga ny fametrahana haingana sy malefaka kokoa. Raha tokony ho lavaka mpanamory fiaramanidina dia manome sosokevitra sasany ny mpanamboatra fandavahana lavaka fanombohana manodidina ny 1/8 santimetatra ny halalin'ilay fitaovana. Misafidiana habe kely izay mitovy refy amin'ny savaivony ao anatiny ary mitandrema mba tsy hiditra lalina ao amin'ilay fitaovana.
Countersink ny visy fa tsy lalina noho ny lohan'ny visy. Ankoatry ny famoronana famaranana misimisy kokoa, ny countersinking lalina dia afaka mampihena ny fahombiazan'ny fastener ary manafoana ny fiantohana. Zava-dehibe ihany koa ny fiarovana ny visy rehetra amin'ny zoro 90 degre amin'ireo zana-kazo. Ny fifadian-kanina avy amin'ny sisiny dia mety hiteraka fihoaram-pefy amin'ny volo mitambatra ary hanimba ny farany.
fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fitaovana WPC, Rihana fametahana WPC, Fanesorana ivelany WPC, Fanapahan-tsokosoko WPC, Fanesorana WPC ivelany,